Futsal wuxuu yimaadaa Marquette Park • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Futsal wuxuu yimaadaa Marquette Park
Fikrad la sameeyay laba sano ka hor ayaa ugu dambayntii laga dhigayaa mid dhab ah Beerta Marquette. Dhawaan xaafadda Dutchtown waxay yeelan doontaa maxkamadda futsal -ka ugu horreysa ee magaalada St. Louis. Dabayaaqadii bishii Luulyo ee 2019, xiisaha kubbadda cagta maxalliga ah Daniel Flynn, deriska Dutchtown iyo Naadiga Kubadda Cagta UMOJA aasaasaha Fred Maboneza, iyo xubno ka mid ah Isbahaysiga Marquette Park kooxdu waxay ku kulmeen Xarunta Madadaalada Marquette Park.
Flynn wuxuu soo maray maxkamado futsal oo si weyn looga heli karo Yurub ka dib markii uu waqti ku qaatay halkaas. “Dhowr sano ka hor, waxaan bilaabay inaan la shaqeeyo Naadiga Kubadda Cagta ee UMOJA,” ayuu yiri Flynn. “Waxaan si joogto ah ugu halgami lahayn inaan helno meelo aan ku ciyaarno futsal. Waxaan si xooggan u dareemnay in kubbadda cagta ay noqoto mid xor ah oo ay heli karaan dadka oo dhan, taasina waxay tusaale u noqon kartaa St. Louis. ”
Kooxdu waxay la kulantay Bill Bixon, oo hore u ahaan jiray Barnaamijyada Jardiinooyinka iyo Madadaalada ee Magaalada St. Louis, waxayna ka wada hadleen waxa loo baahan doono si loo abuuro maxkamad futsal ah oo ku taal Marquette Park. Jawaabtu waxay ahayd wada -hawlgalayaasha xaafadda, tamar badan, iyo waqti.
"Marquette Park waxay muddo dheer hoy u ahayd kubbadda cagta dhinaca Koonfureed, ”Ayuu yiri Madaxweynaha Waddooyinka waaweyn ee Dutchtown Nate Lindsey. "Waxaan ku faraxsanahay inaan bilowno la shaqeynta lamaanayaasha deriska si aan ugu soo kordhinno garoon kubbadda cagta oo dhererkiisu dhan yahay kaas oo sii wadi kara dhaqankaas oo siin kara goob madadaalo ah oo dhallinyaradeenna ay ku raaxeystaan ​​ciyaarta."
Iskaashi Magaalo Weyn
The Waaxda Beeraha Magaalada St. Louis wuxuu ahaa lammaanihii ugu horreeyey ee ku booday doonta. Jardiinooyinku waxay siiyeen fasax si ay u bilaabaan qorshaynta mashruuca waxayna ka go'an tahay inay iskaashi la yeeshaan Qaybta Waddooyinka si ay ugu shubto garoon cusub oo laami ah oo ku yaal maxkamadaha kubbadda laliska ee jira iyo kuwa dheer ee ku xiga Marquette Park Field House.
Iyada oo loo marayo iskaashi gaar ah iyo mid guudba kooxda cusub ee Kubadda Cagta ee Major League St. Louis CITY SC, Wadooyinka Waaweyn ee Dutchtown iyo Xulafada Marquette Park, Shirkadda Koonfurta ee Dutchtown, SAMAY STL, Dhismaha Raineri, McConnell iyo Associates, iyo dhawr deeq -bixiye oo gaar loo leeyahay, qaybaha mashruuca ee hadhay ayaa isu yimid.
"Shaqada Marquette Park inta badan bulshada ayaa wadata, oo ay ka mid tahay shaqada lala yeesho naadiga MLS," ayuu yiri 20 -ka Ward Alderwoman Cara Spencer. “Sannadkan waxaan dib -u -habayn ku samayn doonaa tas -hiilaadka is -beddelka ee Marquette Park Pool waxaanna la shaqayn doonaa bulshada si loo aqoonsado oo mudnaanta loo siiyo maalgashiga sannadka dambe. Habka ugu wanaagsan ee loo maalgashan karo beel waa in lagu hoggaamiyo halka ay doonayaan in doolarkooda canshuurta lagu maalgeliyo. ”
Naqshad Hal-abuur ah
Badeecadda dhammaadku waxay ahaan doontaa maxkamad futsal oo gaar ah oo u furan dadweynaha ku yaal bartamaha St. St. Louis. Dhammaan maxkamadda waxaa daboolay muraayad loogu talagalay Farshaxanka St. Louis Jayvn Solomon. Muraayaddu waxay isu keentaa qaybo ka mid ah qaabka farshaxanka, naadiga kubbadda cagta, iyo xaafadda Dutchtown si loogu abuuro waayo -aragnimo firfircoon oo midab leh ma aha oo kaliya ciyaartooyda maxkamadda, laakiin dhammaan xaafadda ku xeeran beerta.
Kahor intaan la dooran naqshadda ugu dambeysa, xubnaha bulshada ee la shaqeeya Allies of Marquette Park iyo Dutchtown South Community Corporation waxay awoodeen inay miisaamaan waxyaabaha ku jira darbiga.
Hadafyada, oo ay caadaysatay MADE STL, ayaa leh astaamaha labada St. Louis CITY SC iyo xaafadda Dutchtown. Hadafyadu waxay leeyihiin shabagyo ka samaysan biro adkaysi leh si ay uga hortagaan duugga iyo dillaaca cimilada iyo isticmaalka.
Qayb ka mid ah Qorshaha Beerta Marquette
Maxkamadda futsal -ku waxay noqon doontaa mashruucii ugu horreeyay ee weyn tan iyo markii la dhammaystiray qorshe dhammaystiran oo loogu talagalay Marquette Park. Qorshaha waxaa lagu soo ururiyey iskaashi lala yeesho kuwii hore Qorshayaasha PGAV gudaha iyo ardayga Jaamacadda Washington Tiffany Dockins. Dockins wuxuu hadda la shaqeynayaa Dutchtown South Community Corporation si uu u hirgeliyo qorshaha baarkinka iyo kan Hindisaha Greenyaryards ee Dugsiga Hoose ee Froebel.
Dockins ayaa yidhi "Indhaha naqshadeeye da 'yar, Marquette Park waxay leedahay awood badan oo ah sare u qaadis siman laakiin waxay si fudud ugu baahan tahay maalgelinta si ay sidaas u samayso." Markaan ka qiimeeyo dadka deggan iyo la -hawlgalayaasha bulshada, waxaan rajo weyn ka qabaa in Marquette Park ay sii wadi doonto kobcinta oo ay hesho dareenka ay runtii mudan tahay. ”
Haddaba… Waa maxay Futsal?
Futsal waxay la mid tahay nooc kubbadda cagta ah oo hoos loo dhigay oo asal ahaan ka soo jeeday Uruguay, caanna ka noqotay Koonfurta Ameerika, si xawli ahna ugu fidaysa adduunka oo dhan. Badanaa waxaa lagu ciyaaraa gudaha sidoo kale, ciyaarta waxaa lagu ciyaaraa garoon yar oo dusha adag leh waxayna isticmaashaa kubad yar oo adag oo aan soo boodin. Kulamada Futsal -ka waxaa lagu ciyaaraa shan ciyaartoy oo koox ah, ciyaaruhuna waxay ka kooban yihiin laba 20 daqiiqo oo badhkeed ah.
Sababtoo ah xayndaabyada yar ee duurka, futsal wuxuu xoogga saaraa xeeladaha hal -abuurka, farsamada, xakamaynta kubbadda iyo falcelinta degdegga ah. Xiddigo badan oo caan ka ah kubbada cagta adduunka, sida Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo, ayaa ku bilaabay garoonka futsal -ka. Degdeg ah oo gooldhalinta sare leh, futsal wuxuu siiyaa fursado lagu hormarinayo xirfado farsamo oo qiimo leh ciyaartooyda cusub ka hor inta uusan u dhaqaaqin garoonka weyn, iyo sidoo kale inuu u farsameeyo farsamada ciyaartoy khibrad leh oo kubbadda cagta ah.
Marquette Park Futsal Court Furashada Weyn
Maxkamadda cusub ee futsal -ka ayaa diyaar u noqon doonta ciyaarta horraanta bisha Sebtember. Magaalada St. Booqo Kalandarka Dutchtown ama na raac on Facebook, Instagram, Iyo Twitter si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dhacdadan iyo kuwa soo socda Wararka Marquette Park.
Filimka hoos Beerta Marquette. Muuji dhamaan qeybaha. Dutchtown, Wadooyinka Waaweyn ee Dutchtown, Shirkadda Koonfurta ee Dutchtown, Iyo Beerta Marquette. Muuji qaybo yar.
La wadaag qoraalkaan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Qoraalkan ayaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay September 6th, 2021 .
DutchtownSTL.org Beerta Marquette Futsal wuxuu yimaadaa Marquette Park